Shiinaha Tungsten Carbide Axle Gacmo Soosaarka iyo Warshad | N&D Carbide
Tungsten carbide axle armle wuxuu muujinayaa adkaanta sare iyo xoogga dillaaca transverse, oo wuxuu leeyahay waxqabad sare oo ku saabsan iska caabinta abrasion iyo corrosion, taas oo u saamaxeysa in si ballaaran loogu isticmaalo warshado badan.
Tungsten carbide handle axle ayaa si ballaaran loogu yaqaanaa adkeysigooda iyo tayadooda. Waxay u adkeysan kartaa cadaadiska sare waxayna u adkeysaneysaa daxalka, sidaa darteed waxaa loo isticmaalaa bambooyin biyo ah, bambooyin saliid ah iyo bambooyin kale oo kala duwan. Tungsten Carbide axle Sleeves waxaa badanaa loo isticmaalaa bambooyin biyo ah, bambooyin saliid ah iyo bambooyin kale, gaar ahaan waxaa loo isticmaalaa cadaadiska sare ama bambooyin iska caabbinta daxalka, xakamaynta qulqulka. wax.
Qalabka tungsten carbide axle ayaa badanaa loo isticmaali doonaa taageerada wareejinta, isku toosinta, ka-hortagga iyo ka-hortagga dariiqa gawaarida, centrifuge, ilaaliyaha iyo kala-sooca bamka korantada ee ku jira xaaladaha shaqo ee xun ee xawaaraha sare ee rogista, daxalka gaaska ee aagga saliida, sida darafta sita salka, darafta mootada mootada iyo darafta dariiq dhexaad.
Tungsten carbide gacmaha dariiq dhexaadku waxay ku dhejin kartaa ama ilaalin kartaa usheeda dhexe ee usheeda wareega ah si looga hortago duugga usheeda dhexe. Dhanka kale, adkaanta mashiinka wax shiidaya ayaa hooseeya. Mashiinka aan lahayn daminta iyo daaweynta xanaaqa ayaa loo isticmaali karaa, sidaas awgeed wuxuu yareynayaa dhibaatada howsha ee qaybaha la xiriira. Gacmaheena dariiq dhexaadku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka iska caabbinta duugga ah ee xoogga leh, isku dheelitirnaan yar oo khilaaf ah, adkeysi wanaagsan iyo nolol adeeg dheer.
Hore: Tungsten Carbide Guide Bush
Xiga: Carbide Bush iyo Gacanta